सेयर बजार र गरिब किसान | गृहपृष्ठ
Home १० वर्ष अघि सेयर बजार र गरिब किसान
on: June 14, 2019 १० वर्ष अघि
बिजुली, स्काई फोन कम्प्युटरलाई एक ठाउँमा राखिसकेपछि अब त नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट पनि खोल्न सकिन्छ । गत मंसिर महिनामा घरको लौनो भैंसी बेचेर, नाककानका गहना धितो राखेर र नजिकैको साहुबाट ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर किनेको कृषि विकास बैंकको सेयर मूल्य कति भएछ भनेर गाउँले किसान लगानीकर्ताले घरमै प्रत्यक्ष हेर्न सक्नेछन् । तर यतिकैमा म झसंग हुन्छु कि कृषि विकास बैंकको सेयर बाँडफाँड त भयो तर प्रमाणपत्र खोई ? हालको नियमअनुसार प्रमाभणपत्र नभई विक्री गर्न सकिँदैन । बाँडफाँड भएको दुई महिनाभित्र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ३३ मा उल्लेख छ । उक्त सेयरको बाँडफाँड २०६४ चैत २२ गते नै भएको थियो । म प्रश्न गर्छु, यो नियम कसका लागि बनाइएको हो ? र कसले पालना गर्ने होला ?
मेरा छिमेकीले त्यो सेयर प्रमाणपत्र केही दिनमा हात पारे भने तिनले ध्यान दिएर टेलिभिजनमा कृषि विकास बैंकको सेयरको समाचार आउँछ कि भनी कुरेर बस्नेछन् । अथवा नेपाला स्टक डटकम खोल्न लगाउनेछन् । र कृषि विकास बैंकको सेयर मूल्य खोज्नेछन् ।
नेपाल स्टक एक्सेचन्जमा सूचीकरण नभई कुनै पनि कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न सकिँदैन । सेयर बाँडफाँड भएको ४५ दिन भित्र सेयर सूचीकरण गर्नुपर्ने नियममा उल्लेख छ । यसबारे थप बुझ्न कृषि विकास बैंकको सेयर निष्कासनको विवरणपत्र पल्टाउँछु । विवरणपत्रमा लेखिएअनुसार यो निष्कासनको अवधि सकिएको तीन महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन र त्यो सेयर बाँडफाँड गरेपछि सबै सेयर एकैपटक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गर्ने भनिएको रहेछ
(रवीद्र भट्टराईको आलेखबाट)